Dood ka Aloosantay Maadada Blutooniyumka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dood ka Aloosantay Maadada Blutooniyumka
La daabacay fredag 27 april 2012 kl 11.07
Waxaan ilaa hadda cadeeyn doodina ka taagan tahay sida dawladda mareeykanku u isticmaali doonto dhowr kiilo oo ah maadada balutooniyumka ee dalkan Iswiidhen gacanta u geliyay dawladda mareeyka bishii feebaraayo ee ina dhaaftay. Wasiirka arrimmaha dibadda Carl Bildt, ayaa sheegay in balutooniyumka carrigaa loo geeyey sidii lagu baabi'in lahaa ee aan loo geeyn in loo isticmaalo milateri ahaan. Lars Hildingsson, ayaa maadadaa faraha ku hayay hayadda ka hor-tagga shucaaca:
- Xaqiiqdii ogaan mayno halka maadadaasi ku dambeeyn doonto. Waxaa iminka masuuliyaddeeda la wareegay wasaaradda tamarta ee dalka Mareeykanka. Mana jirto wax masuuliyad ah ee dalkan ka saaran iyo si aannu ku ogaan lahayn halka ay maadadaasi ku dambayn.
Maadada balutooniyumka ayaa ah midda ugu muhiimsan kolka la sameeyneyo hubka nucliyarka, waana maaddo ka dhib badan sidii loo xafidi lahaa marka loo barbar-dhigo haraaga ama wasakhda ka soo baxda warshadaha quwadda korontada ee nukliyarka. Middaa ayaa ugu wacneeyd in kolkii dalka laga dhoofinayay si taxadar leh oo dhuumaaleeysi ah loo hannaaneeyey.
Qorshahaa kolkii lagu guuleeystay ayuu wasiirka arrimmaha dibadda Carl Bildt sawir qeexan ka bixiyay halka ay maadadaasui ku dambeeyn doonto. Isagoona sheegay in la baabi'in doono. Su'aal ahayd in dib loo isticmaali doono ayuu wasiirku maya uga jawaabay.